२५ बर्षिय नितु आफ्नै आमा बुवाको अघि आएर उभिदा बे’होस भै ढले, घ’टना भयो अचम्मैको ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/२५ बर्षिय नितु आफ्नै आमा बुवाको अघि आएर उभिदा बे’होस भै ढले, घ’टना भयो अचम्मैको !
एजेन्सी । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ काेही म*रिसकेकाे ब्यक्ती फेरी हिँड्दै हिँड्दै घर फर्कियाे भन्दा कुनै फिल्मकाे दृश्यमा जस्तै लाग्ने एउटा समाचार बाहिरिएकाे छ । भारतीय सञ्चार माध्यम अाजतकले लेखेकाे समाचार अनुसार नोएडामा एक २५ बर्षिय महिलासँग यस्तै अचम्मको घ’टना घ’टेको छ । परिवारले उनलाई म*रेको सम्झेर दा’हासंस्कार गरिदिएको थियो ।
तर २७ दिनपछि उनी हिडदै घर आईन । परिवारलाई यो निक्कै ठुलो आश्चर्यको बिषय बनेको थियो । पहिले त उनका अ’भिभावकलाई विश्वास लागेको थिएन जस्को उनीहरुले दा’हसंस्कार गरेका थिए उनै अगाडि आउँदा की यो तिनै नीतू हुन् भनि जस्ले सास लिदै थिईन र जि’उँदो थिईन् ।
घ’टना यस्तो थियो केहि दिन अघि नीतू आफ्नो घर देखी हराईन् । परिवारले प्रहरीमा निवेदन दिए । प्रहरीले नीताको श्रीमान् राम लखनमाथि शं’का गर्‍यो । पछि प्रहरीले राम लखनलाई दो’षी पाएन । नीतूको परिवारलाई एउटा मृ*त शरीर देखाए जुन नोयडाको सेक्टर ११५ मा भेटेका थिए जस्को शरीर पुरै ड’ढेको थियो । परिवारलाई उक्त शरीर नीतूको जस्तोलागेको थियो । प्रहरीले डिएनए स्याम्पल नजाँची सहजै सो श व दिएको थियो ।
मन्दिरभित्र ला*शको रुपमा फेला परेकी सम्झनामाथि यतिसम्म भएको रहेछ, सबै प्रमाण भेटियो